पाचन प्रणाली कसरी राम्रो बनाउने ? - Sarokar Khabar
१० श्रावण २०७७, शनिबार ००:४८
१० श्रावण २०७७, शनिबार ००:४८0
खाना खाएपछि चकटी ओछ्याएर बसौं । दुवै घुँडालाई मोड्ने र हत्केलाको बलले बस्नुपर्छ । दुवै खुट्टाका औंलाहरु आपसमा मिलेको हुनुपर्छ र कुरकुच्चामा अलिकति दूरी हुनुपर्छ । शरीरको पूरै भार खुट्टामा सार्ने । बज्रासन गर्ने क्रममा कम्मरलाई एकदम सिधा राख्नुपर्छ । यही अवस्थामा दस मिनेट बस्ने र लामो–लामो सास लिनुपर्छ । बज्रासनको दौरान शरीरको मध्यभागमा सबैभन्दा बेसी दवाव पर्छ । यसबाट पेट तथा आन्द्रामा हल्का दबाब पर्छ जसले गर्दा कब्जियतको समस्या हट्छ । अनलाईन खबरको सहयोगमा
केशव देवकोटाद्धारा केन्द्रिय सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा १० श्रावण २०७७, शनिबार ००:४८
गुट रहित पार्टी बनाई जिल्लामा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउछु : पोख्रेल १० श्रावण २०७७, शनिबार ००:४८
कविता : दिउ अरुलाइ नै दोष दिउ ! १० श्रावण २०७७, शनिबार ००:४८
सेवा निवृत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सम्मानित १० श्रावण २०७७, शनिबार ००:४८
सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना १० श्रावण २०७७, शनिबार ००:४८
प्लानद्धारा कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान १० श्रावण २०७७, शनिबार ००:४८
कोभिड–१९ अस्पतालाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान १० श्रावण २०७७, शनिबार ००:४८
गोलन्जोरमा कृषकलाई राँगा र बोका वितरण १० श्रावण २०७७, शनिबार ००:४८
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुरोध १० श्रावण २०७७, शनिबार ००:४८
दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण १० श्रावण २०७७, शनिबार ००:४८